EPP MAIBAHOAKA: Ho ezahina tanterahina ny fanirian’ireo mpianatra · déliremadagascar
FAMPINDRAMAM-BOLA ATAON’NY CNAPS : Mitentina 50 miliara ariary ny vola ampiasaina
LIONS CLUB MADAGASCAR: 10.000 dolara atokana iadiana amin’ny COVID 19
EPP MAIBAHOAKA: Ho ezahina tanterahina ny fanirian’ireo mpianatra
Socio-eco	 25 janvier 2020 R Nirina
Havadika ho azo tsapain-tanana. Nitafa niaraka tamin’ireo mpianatry ny EPP Maibahoaka Ivato ireo tomponandraikitra ao amin’ny Orange Madagascar, androany 24 janoary 2020. Tsy mijanona amin’ny fanomezana tolotra mifanaraka amin’ny filan’ny mpanjifa amin’ny maha orinasam-pifandraisan-davitra azy ihany ny Orange fa mikatsaka ihany koa ny mahasoa ny mpiara-belona amin’ny lafiny ara-tsosialy hahatrarana ny fampandrosoana maharitra. Nasaina naneho fomba fijeriny ny atao hoe: tontolo tsaratsara kokoa ireo mpianatra. Tamin’ny alalany ohatra an-tsary nataon’izy ireo dia hevitra maro no nivoaka. “Hiezaka handika sy hampihatra izany ho lasa azo tsapain-tanana amin’ny fiainana andavanandro ny Orange Madagascar”, araka ny fampitam-baovao voaray.
Ankoatra izany, nanolotra boky ho an’ny sekoly ny tomponandraikitra avy ao amin’ny orinasa. Manampy amin’ny fampitàna ny fahalalana ireo boky ireo. Mpianatra 243 no nisitraka izao hetsika nataon’ny Orange Madagascar izao. Nofaranana tamin’ny alalan’ny fizarana vatomamy sy biscuit ny fihaonana nataon’izy ireo.
FAMPINDRAMAM-BOLA ATAON’NY CNAPS : Mit...
LIONS CLUB MADAGASCAR: 10.000 dolara ato...
FAMPINDRAMAM-BOLA ATAON’NY CNAPS : Mitentina 50 miliara ariary ny vola ampiasaina 14 août 2020
LIONS CLUB MADAGASCAR: 10.000 dolara atokana iadiana amin’ny COVID 19 13 août 2020